Paris Saint-Germain oo doonaysa inay la wareegto xiddig ka tirsan Kooxda Chelsea inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga xiddigaha – Gool FM
Haaruun September 24, 2020
(Paris) 24 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa la soo warinayaa inay qorsheynayso inay u dhaqaaqdo soo xero-gelinta daafaca naadiga Chelsea ee Antonio Rudiger, ka hor inta aan albaabada loo laabin suuqa kala iibsiga xiddigaha.
Rudiger ayaa ka maqnaa shaxda Chelsea labadii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la kala ciyaareen kooxaha Liverpool iyo Barnsley, halka xiddiga xulka qaranka Jarmalka uusan weli hal daqiiqo u ciyaarin kooxda Premier League ka dheesha xilli ciyaareedkan.
Warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegtay in 27-sano jirkaan uu ka tagayo garoonka Stamford Bridge toddobaadyada soo socda, sida laga soo xigtay wargeyska Daily Mail, PSG ayaa xiiseynaysa saxiixiisa.
Daafaca oo 31 kulan u saftay xulka qaranka Jarmalka ayaa Chelsea kaga soo biiray kooxda Roma sanadkii 2017.
Rudiger ayaa u saftay Blues 115 kulan tartammada oo dhan, laakiin waxa uu hoos uga dhacay safka hore ee xilli ciyaareedkan, waxaana la filayaa inuu baxo ka hor inta aan la gaarin bisha 05 bisha October oo ah maalinta ugu dambeysa ee suuqa kala iibsiga uu xirmayo.
PSG ayaa sidoo kale la sheegayaa inay miisaameyso saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea, Tiemoue Bakayoko.